ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဘလော့ဂါ ဆိုတာ ???
အမှန်တွေကို ဇာတ်လမ်းဆင် ရေးတတ်တာလဲ ဘလော့ဂါ...း)
အမှန်တွေချည်းပါလားလို့.. မောင်မျိုးး)
အားပါး ထူးထူးခြားခြား မနိုင်းဆီက မှတ်ချက်ရနေတယ်ဗျို့း)) ကျေးဇူး အစ်မ ဟုတ်တယ် ကိုယ့်အဖြစ်ကိုလည်း ဇတ်လမ်းဆင်ရေးတတ်သေးတာ ဘလော့ဂါ :P
ငါ့ညီလုပ်မှဘဲ ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲသိတော့တယ် ...
အဟားးး ဘလော့ဂါကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခိုင်းတဲ့အထဲမှ မောင်မျိုးရဲ့ အရေးကတော့ အမိုက်ဆုံးပဲ...ခိုက်တယ်...။
ဖွင့်မရ ဂျက်ကျလည်း ပို့စ်ရေးဖို့ တွေးတာ
အနုအရွ အပုအကွတွေနဲ့ ဟဟဟဟ
စားမရ အိပ်မရ ဖြစ်ရတာလဲ ဘလော့ဂါ...။
စိတ်တွေမှိုင်ကာ နေမထိထိုင်မထိ ဖြစ်ရတာလဲ ဘလော့ဂါ...။
( ရေးရင်တော့မဆုံးတော့ပါဘူး မောင်မျိုးရေ..)
ဖော်လည်းဖော်ချင်တယ် ပေါ်မှာလည်း ကြောက်တာ အဲ့တာ “ဘလော့ဂါ ” ဆိုပါလား။ ကိုမျိုးက အမှန်တွေချည်းပြောပြီး ဘလော့ဂါလို့ သတ်မှတ်သွားတာကိုး...
အမှန်တွေ ဘာလို့ ပြောရတာလဲ ကိုမျိုးရဲ့ ခက်တော့ ခက်နေပါပြီ :P:P မှတ်ပြီလား..ဟင် ..အဲဒါ ဘလော့ဂါ.....တဲ့ ...:):)
ခရီးထွက်ရင်တောင် ကိုယ့်ဘလော့လေးကို ထားခဲ့ရတာ စိတ်မချတာလည်း ဘလော်ဂါပါဘဲ။
ရည်းစားထက်တောင် ဘလော့ကို ပိုချစ်တာလည်း ဘလော်ဂါဘဲထင်ပါရဲ့း)
ဟား... တယ်မှန်ပါလား၊ ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်တိုင်းက ကွက်တိပဲ ညီရေ့...၊ အတော်လေး သဘောကျ သွားတယ်..။း)
နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်နေရတောင်မှ တွေးတောနေမိတာလည်း ဘလော့ဂါပါပဲ။ မောင်မျိုးရေးတာလေးက အများနဲမတူ တစ်မူထူးပြီး ကောင်းနေပါရောလား။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ မောင်မျိုးရေ။
ကျန်ခဲ့လို့ ဖြည့်ပေးသွားတာမညိုညင်ရဘူးနော်
ဒါလဲ ဟုတ်သားဘဲ။ တစ်ယောက်ဆီက တစ်မျိုးယူပြီး ဘလော့ဂါဖွင့်ဆိုချက်ပေါင်းချုပ် ထုတ်စားဦးမှထင်တယ်။း))
ဘာပဲရေးရေး ပ၇ိသတ်တွေရဲ့ ကော်မန့်ကိုရရှိပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရတာလဲ ဘလော့ဂါပဲထင်တယ်။ ဖြည့်စွက်ကြည့်တာပါ ကိုကြီးမျိုး။း)
အလိုလေး တကယ့်အာဇာနည် ဘလော့ဂါက ကငြိမ်းနိုင်ဖြစ်နေပါရော့လား...သူ့အရင်းအနှီးထဲမှာ ရည်းစားပါ ပါသွားသကိုး...
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟုတ်တယ်အစ်ကိုမျိုးရေ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခရောက်နေပါစေ။ Post ရေးဖို့စဉ်းစားနေမိတာ ဘလော့ကာပါခင်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေအစ်ကိုမောင်မျိုး ခင်ဗျာ။
the meaning of blogger!
ရီဒါကနေ ဖတ်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်တွေ ဝင်မပေးဖြစ်တာလဲ ဘလော့ဂါ.....
အမြဲဖတ်ပါတယ် မောင်မျိုးရယ်.. ကွန်မန့်မချန်ရုံလေးပါ.. ဒါဟာလည်း ဘလော့ဂါး)
အမလေး မောင်မျိုးရဲ့ မင်းရေးတော့မှာပဲ ဘလော်ဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ ငါသိသွားပီး . . သိသွားပြီးတာနဲ့ ငိုချင်း ချလိုက်ချင်တော့တယ်ကွယ်း))))
ဈေးထဲက ကုလား ကန်စွန်းရောင်းတာ လဲ ဘလော်ဂါ :D
သေချာတာပေါ့ အတိအကျပဲ။ မောင်မျိုးတို့များ ရေးတတ်ချက်တော်... ကဗျာကို တပြုံးပြုံးနဲ့ ထပ်ကာထပ်ကာ ဖတ်မိသွားတယ်။
အဲဒီကဗျာနဲ့ တထပ်တည်းကျတာ ဘလော့ဂါ...း))
ကဗျာလေးက မိုက်ချက်။ သူများတွေတင်သလို ၂ ရက် တစ်ပုဒ်လောက် မတင်နိုင်တာတော့ တူတူပဲ။း)